Mpamatsy vovoka Cyclone Industrial avo lenta lafo vidy sy mpamatsy | YiZheng
Inona ilay Cyclone Powder Dust Collector?
Mpanangona vovoka amin'ny rivodoza dia karazana fitaovana fanalana vovoka. Ny mpanangona vovoka dia manana fahafaha-manangona avo kokoa amin'ny vovoka miaraka amin'ny gravité manokana lehibe kokoa sy ireo sombina matevina kokoa. Raha ny fiheverana ny vovoka, ny hatevin'ny vovoka dia azo ampiasaina ho fanesorana vovoka voalohany na fanesorana vovoka tokana, ho an'ny gazy misy vovoka manimba sy entona misy vovoka maripana avo lenta, azo angonina sy haverina ampiasaina koa izy io.
Ny singa tsirairay ao amin'ny mpanangona vovoka cyclone dia manana refy habe. Ny fiovana rehetra amin'ity fifandanjana ity dia mety hisy fiatraikany amin'ny fahombiazana sy ny fihenan'ny tsindry ataon'ny mpanangona vovoka cyclone. Ny savaivon'ny mpanangona vovoka, ny haben'ny fidiran'ny rivotra ary ny savaivon'ny fantsom-panafody no tena mitaona. Ho fanampin'izany, misy lafin-javatra sasany mahasoa amin'ny fanatsarana ny fahombiazan'ny fanesorana vovoka, saingy hampitombo ny fihenan'ny tsindry, noho izany dia tokony hodinihina ny fanitsiana ny singa tsirairay.
Inona no ampiasain'ny Cyclone Powder Dust Collector ho an'ny？
NY Mpanangona vovoka amin'ny rivodoza dia be mpampiasa amin'ny metallurgy, casting, akora fananganana, indostria simika, voamaina, simenitra, solika, indostria maivana ary indostria hafa. Izy io dia azo ampiasaina ho fitaovana fitaovana fanodinana mba hamenoana vovoka maina tsy misy fibrous sy fanesorana vovoka.
Mampiavaka ny Cyclone Dust Collector
1.Tsy misy faritra mihetsiketsika ao anatin'ny mpanangona vovoka cyclone. Fikolokoloana mora.
2. Rehefa mifampiraharaha amin'ny habetsaky ny rivotra be dia be, mora kokoa raha ampiasaina miaraka aminy ny singa marobe, ary tsy ho voakasik'izany ny fanoherana ny fahombiazany.
3. Fitaovana mpampisaraka vovoka dia afaka manohitra ny hafanan'ny 600 ℃. Raha fitaovana manokana mahatohitra hafanana ambony no ampiasaina, dia afaka manohitra ny mari-pana ambonimbony ihany koa izy io.
4. Aorian'ny fampidiran'ny mpanangona vovoka amin'ny rindrina tsy mahazaka akanjo, dia azo ampiasaina izy io hanadiovana ny etona flue misy vovoka mahery vaika.
5. Izy io dia manampy amin'ny fanodinana vovoka sarobidy.
Fandidiana sy fikojakojana marin-toerana
ny Mpanangona vovoka amin'ny rivodoza dia tsotra amin'ny firafiny, mora amboarina, apetraka, hotehirizina ary tantanana.
(1) Masontsivana miasa azo antoka
Ny masontsivana fiasan'ny mpanangona vovoka cyclone dia ahitana indrindra: ny hafainganan'ny rivotra miditra ao amin'ny mpanangona vovoka, ny mari-pana amin'ny entona voadinika ary ny fifangaroan'ny masinina misy vovoka.
(2) Fisorohana ny famoahana rivotra
Raha vantany vao mivoaka ny mpanangona vovoka siklone dia hisy fiatraikany lehibe amin'ny vokan'ny fanesorana vovoka. Raha ny tombatombana, ny fahombiazan'ny fanesorana vovoka dia hihena 5% raha 1% ny fivoahan'ny rivotra amin'ny koba ambany an'ny mpanangona vovoka; ny fahombiazan'ny fanesorana vovoka dia hihena 30% rehefa 5% ny famoahana rivotra.
(3) Fisorohana ny fitafian'ny ampahany lehibe
Ny anton-javatra misy fiatraikany amin'ny fitaovan'ny ampahany manan-danja dia misy ny enta-mavesatra, ny hafainganan'ny rivotra, ny vovoka ary ny ampahany efa tonta dia misy akorandriaka, kônina ary fivoahan'ny vovoka.
(4) Sorohy ny fanakanana vovoka sy ny fanangonana vovoka
Ny fanakatonana sy ny fanangonana vovoka an'ny mpanangona vovoka cyclone dia miseho eo akaikin'ny fivoahan'ny vovoka, ary ny faharoa dia miseho amin'ny fantsom-pandraisana sy ny fantsona.
Fampisehoana horonantsary vovoky ny vovoka rivodoza
Safidy modely mpamory vovoka rivodoza
Hamboarinay ny Mpanangona vovoka amin'ny rivodoza ny famaritana mety aminao araka ny maodelin'ny masinina fanamainana zezika sy ny tena toetran'ny asa.
Teo aloha: Fampiroboroboana ny hafanana avo lenta amin'ny indostrialy
Manaraka: Pulverized Coal Burner
Fampidirana Inona no atao hoe Rotary Drum Compound Fertilizer Granulator Machine? Rotary Drum Compound Fertilizer Granulator dia iray amin'ireo fitaovana lehibe amin'ny indostrian'ny zezika mitambatra. Ny fomba fiasa lehibe dia ny ody miaraka amin'ny granulation lena. Amin'ny alàlan'ny rano na setroka sasany, ny zezika fototra dia voatsabo simika tanteraka amin'ny cyli ...